प्रधानमन्त्रीको कर्मले जन्माएको आलोचना र आशंका - Sankalpa Khabar
प्रधानमन्त्रीको कर्मले जन्माएको आलोचना र आशंका
२८ जेष्ठ ०७:१७
मुलुकमा महामारी डडेलो झै सल्किरहेको छ । दैनिक हजारौं नागरिक कोरोना संक्रमित छन् । संक्रमणकै कारण दैनिक सयौ नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । न्युन संख्यामा कोभिड टेष्ट गरिएको छ । र पनि राज्यले यस्तो भयाभह तथ्यांक नै दैनिक दिइरहेको छ । यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ मुलुकमा कोभिड महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ ।
बन्दाबन्दी बाहेक राज्यले कोरोना महामारीका लागि अर्को भरपर्दो विकल्प देखेको छैन । राज्यद्वारा गरिएको बन्दावन्दीका कारण रोग र भोकले नै नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बन्दाबन्दीसँगै दैनिक रोजिरोटी गरेर घरपरिवार चलाउने विपन्न मजदुरको चुलो बल्न छोडेको छ । सरकारले ति परिवारलाई भोकभोकै घरमा थुनेर राखेको छ । केही सामाजिक संस्थाहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुको भोक मेटाइ रहेका छन । सरकार भने ती सामाजिक संस्थालाई पनि दमन र नियन्त्रण र प्रतिवन्ध लागाउने जस्तोे नीच कार्य गरिरहेको छ ।
ओलीमाथि निकै आशा र अपेक्षा राखेका जनतामा निराशा छाएको छ । उनले गरेका नराम्रा कामभित्रबाट रामा काम खोजेर मन बुझाउन अवस्था उनका कार्यकर्तालाई आएको छ ।
अहिले सरकारको ध्यान सत्तामा भन्दा महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु पथ्र्यो । तर, सरकार महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन सकेन । जसको फलस्वरुप महामारी सहरदेखि ग्रामीण बस्तीसम्म चैतको डडेलो झै फैलिन पुग्यो । यसको दोस कसलाई ? सरकार समयमा नै महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर भएको भए पक्कै पनि यो भयाभह अवस्था आउने थिएन । जनताले सामान्य औषधि उपचार, वेड, अक्सिजन, आइसीयु र भेन्टिेलट नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । र, सरकारको यतिविघ्न आलोचना पनि हुने थिएन ।
सरकारले महामारी नियन्त्रणमा जति पनि कदम चाल्यो, त्यसमा सफा नियत देखिएन । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नराम्ररी चुकेको सरकार स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, खोप खरिदमा कमिशनजस्ता अमानवीय र संवेदनशील काण्डमा मुछियो । सरकारले जोखिम मोलेर महामारीमा होमिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको सम्मान र सुरक्षासमेत गर्न सकेन । कर्तव्यबाट विचलित नभएका स्वास्थ्कर्मीकै बलमा यो महामारी नियन्त्रणमा आएको कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
वर्तमान सरकारको नियत ठीक भएको भए शासन सञ्चालन गर्न विद्यमान संविधान ऐन कानून नै काफी थियो । तर, सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता भत्काउने खेलमा लागेका कारण मुलुकमा अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भयो । जुन अवस्था आउला भन्ने केपी ओली र उनको दललाई भोट दिने मतदाताले कल्पना समेत पनि गरेका थिएनन । ओलीमाथि निकै आशा र अपेक्षा राखेका जनतामा निराशा छाएको छ । उनले गरेका नराम्रा कामभित्रबाट रामा काम खोजेर मन बुझाउन अवस्था उनका कार्यकर्तालाई आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अपारदर्शी गतिविधिले नै उनीप्रति आलोचाना र आशंका जन्मिएको हो ।
देउवा सरकारले कहिले पाउँदैछ पूर्णता ?
५ श्रावण १९:४७
क्रियाशील छानबिन समितिले प्रतिवेदन मंगलबार सभापति देउवालाई बुझाउने
९ श्रावण १५:५६